मेल एस्कर्ट | काव्यालय
by बिपिन अर्याल २० असार २०७७
म यस कथाको न्यारेटर तपाईंहरुसँग यो अनुरोध गर्छु, कृपया १८ बर्ष उमेर नाघ्नुभएका पाठक महोदय/याहरुले मात्र कथा पढिदिनु होला।
“तिमीलाई थाहा छ, तिमी कहाँ उभिएको छौ । यहाँ शरीरको मोल मोलाई हुन्छ ।” म अर्थात् एक पुरुष, निलो, गुलाबी बल्ब राखिएको यो कोठामा आफूलाई बजारमा बेच्नका लागि उभिएको थिएँ।
मैले जवाफ दिएँ, ‘हो, थाहा छ तर पैसाको लागि म जेपनि गर्नेछु।’ म पैसाको लागि पुरूष वेश्या बन्दै थिएँ । के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
कलेज कि एउटी साथीले मलाई उनीसँगको कन्ट्याक्ट मिलाइदिएकी थिइन् । कक्षामा केटाहरुले आफ्ना भिडमा उसलाई ‘माल’ भन्थे, उनी एक यौनकर्मी थिइन । भन्थिन्, ‘मलाई पढाउनेले पनि मसँग यौन सम्बन्ध राखेका छन्, र पढ्नेहरूको जमातपनि ठूलो छ । म १२ वर्षको हुँदा आफ्नै काकाबाट बलातकृत भएकि थिएँ तर आजकल मलाई यौन मेरो एक मात्र पेशाजस्तो लाग्छ । मलाई त लाग्छ यौन एउटा मात्र यस्तो सुन्दर, प्राकृतिक र स्वस्थकर चिज हो जसलाई मान्छेले पैसाले किन्न सक्छन् । मलाई त आफू यौनकर्मी भएकोमा कुनै पश्चाताप छैन किनकि मैले हजारौं यौनका भोका र बलात्कारीलाई नराम्रो काम गर्न बाट जोगिएकी छु ।
आज म यौनको रंगमञ्चमा थिएँ । म अघिल्तिर पुतना जस्तो डरलाग्दो स्त्री थिइन् । म डराइरहेको थिएँ तर उनी आफै मलाई नजिक ल्याएर मेरा अङ्ग-अङ्गसँग खेल्न लागिन् । मेरो उत्तेजना बढिरहेको थियो मेरा शरीर कामुक भइरहेको थियो । मैले उत्तेजनाको बाढीलाई रोक्न सकिनँ र उनका अङ्गमा स्पर्श गर्न लागेँ तर म निकै झस्किएँ “एक पुरुषको लिङ्ग जस्तो तर बेकाम लिङ्ग मेरो हातमा पर्यो तुरुन्तै हात निकालेँ”। तर मलाई त पैसा कमाउनु थियो र मैले सम्झैता गरेँ मेरो इज्जत र पैसाबिच ।
एकछिन मलाई लाग्यो कि मेरो विवेक मरिरहेको छ । म एउटा यस्तो परिवारको सदस्य हुँ जहाँ कसैलेपनि सोच्न सक्दैन कि मैले यतिसम्म गर्न सक्छु । तर मेरा आवश्यकताले मलाई यहाँ धकेल्यो । मैले उनलाई सोधेँ, ‘म कहिलेसम्म यहाँ बस्नुपर्छ ? भोलि मेरो कलेज छ ।’
‘जा पढेर बस् । यहाँ के गरिरहेको छस् ?’ यस्तो जवाफ पाएपछि म चुप बसेँ । केही मिनेटमा नै म यो बजारका लागि एउटा नयाँ माल भएँ । ती तेस्रोलिङ्गी मसँग अचानक नरम भएर बोलिन्, ‘तेरो फोटो पठाउनुपर्छ । नपठाए कसैले कुरा गर्दैन ।’
यो सुन्ने बित्तिकै मेरो हालत खराब भयो । मेरो तस्बिर रेड मार्केटमा सार्वजनिक हुँदै थियो । आफन्तले मेरो तस्बिर देखे मेरो भविष्य के होला, यस्तै सोचेर डराएँ ।
सुरुमा दायाँबाट, त्यसपछि बायाँबाट र अन्तिममा अगाडिबाट मेरो तस्बिर खिचियो । त्यसबाहेक अन्य दुई आकर्षक तस्बिर पनि मागियो । त्यो हो लिङ्ग र मेरो छातीको तस्बिर । मेरा लिङ्गको मोटाई लम्बाई हेरेर मेरो रेट निर्धारण हुन्थ्यो ।
मेरो अगाडि नै ती तस्बिर कसैलाई मेसेन्जरमा पठाइयो । तस्बिरसँगै लेखिएको थियो, ‘न्यु कल बोइ इन रेड मार्केट।’ धेरैले इनबक्स गर्न लागे तर सबै इनबक्समा मलाई सस्तो रेटमा खरिद गर्न चाहनेको मात्र भिड थियो । त्यसकारण फोटो फेरि इडिट गरियो र लेखियो ‘रेट उइल नट कन्सिडर’। मेरो मूल्य तोकिँदै थियो, अन्त्यमा सात हजार रुपैयाँमा तय भयो ।
यसमा मैले क्लाइन्टको प्यास मेटाउनु थियो । यो सबै कुरा कुनै ठूलो पर्दाको लागि बनाइएको नाटक थिएन, बल्कि मेरो जीवनको यथार्थता थियो ‘तितो सत्य ‘! मलाई निकै अचम्म लागिरहेको थियो । मैले जिन्दगीमा पहिलो पटक यस्तो गर्दै थिएँ । आजसम्म मैले कुनै विवाहित र पारिवारिक स्त्रीसँग सहवास गरेको थिइनँ । तर कलेजमा भने आफ्नो उमेरका युवतीहरुसँगको प्रेमिल सुखद क्षणको भने मलाई धेरै नै अनुभव थियो । प्रेम र भावनाबिना कसरी गर्ने ? एक अपरिचितसँग कसरी गर्ने होला भन्दै मेरो दिमाग रोटे पिङमा जस्तो घुमिरहेको थियो।
पहेंलो ट्याक्सी चढेर म त्यही दिन काठमाण्डौँको एक इलाकामा रहेको घरमा छिरेँ । घरभित्र ठूलो फ्रिज थियो, जसमा रक्सीको बोतल भरिएका थिए । घरमा निकै ठूलो टिभी पनि थियो । उनी सायद ३०-३५ वर्षकी विवाहित महिला थिइन् । कुराकानी सुरु भयो र उनले भनिन्, ‘म त गलत ठाउँमा फँसे । मेरा श्रीमान् समलिङ्गी हुन् र युरोप बस्छन् । म सम्बन्धविच्छेद पनि गर्न सक्दिनँ । एक सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलासँग कसले विवाह गर्छ ? मेरो पनि विभिन्न कुरामा रुची हुन्छ, भन म के गरुँ ।’
हामी दुबैले रक्सी पियौं । उनले अङ्ग्रेजी गीत बजाइन् र मेरा अगाडि अंग प्रदर्शन गर्न सुरु गरिन् । हामी दुबै डाइनिङ रुमबाट बेडरुममा गयौँ ।अहिलेसम्म उनले मसँग निकै प्रेमपूर्वक कुरा गरिरहेकी थिइन् । काम सिद्धिने बित्तिकै पैसा दिएर भनिन्, ‘ल अब यहाँबाट गइहाल् ।’ उनले मलाई टिप्स पनि दिइन् । मैले उनलाई भनें, ‘मैले यो सबै पैसाको बाध्यताका कारण गरिरहेको छु ।’ उनले भनिन्, ‘तेरो बाध्यतालाई म शौख बनाइदिन्छु ।’
मेरो बाध्यता जुन काठमाण्डौँबाट सैयौं किलोमिटर टाढा मेरो घरबाट सुरु भएको थियो । म गरिब परिवारमा हुर्केको थिएँ, मेरो जन्म भएकै दिन बा मरेका रे, त्यसैले मलाई परिवारले अभागी सोच्दथ्यो । समयसँगै म परिवारबाट टाढिएँ । मेरो सपना मेनेजमेन्ट पढ्नु थियो तर मानविकी पढ्न बाध्य बनाइयो र जागिर भेटियो ठमेलमा । अफिसमा सबैजना अंग्रेजी बोल्थे । भाषा र अफिसको किचलोका कारण म तनावमा हुन्थेँ । बाथरुम गएर रुन थालेँ भने पनि कार्डको चेक इन र चेक आउट टाइमलाई नोट गरेर भनिन्थ्यो, ‘यो सिटमा छैन ।’ मेरो आत्मविश्वास क्षीण हुन थाल्यो । डिप्रेशनले क्रमशः मलाई गाँज्न थाल्यो । डाक्टरलाई पनि भेटेँ तर समस्या सिद्धिएनन् ।
जिम्मेवारी र समस्याको पहाड काँधमा यति भारी लाग्न थाल्यो कि मैले इन्टरनेटमा सर्च गर्न सुरु गरेँ । मेनेजमेन्ट पढ्नका लागि, घरमा पैसा पठाउनका लागि, काठमाण्डौँको यो जागिर छोडेर भाग्नका लागि, मैले जसरी पनि पैसा कमाउनु थियो । यसैबीच मैले इन्टरनेटमा मेल एस्कर्ट अर्थात् पुरुष यौनकर्मी बन्ने बाटो देखेँ । यस्तो फिल्ममा मात्र देखेको थिएँ । पुरुष यौनकर्मी बन्नका लागि प्रोफाइल बनाइने केही वेबसाइटबारे थाहा पाएँ । नेपालमा भने यसको सुरुवात भइसकेको थिएन । प्रोफाइल लेख्न डर लागिरहेको थियो । म त्यो प्रवेशद्वारमा उभिएको थिएँ जहाँ मसँग आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न दुईवटा बाटो बचेका थिए ।
– पहिलो: प्रवेशद्वार पार गरेर यौनकर्मी बन्ने।
– दोस्रो: पहिलो बाहेक केहि नसोच्ने।
मैले प्रवेशद्वार नाघ्ने निर्णय गरिसकेको थिएँ ।
मैले जुन महिलालाई भेटें त्यसमा विवाहित, सम्बन्धविच्छेद भएका, विधवा र किशोरी पनि समावेश थिए । किशोरीहरु भन्दा अरू महिलाहरु यौन कृडामा अभ्यस्त हुन्थे । यीमध्ये धेरैकालागि म मानिस नभई माल थिएँ । जबसम्म उनीहरुको इच्छा पुरा हुँदैनथ्यो सबैले निकै राम्रोसँग कुरा गर्दथे । आफ्ना श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर मसँग विवाह गर्नेसम्म भन्थे तर बेडरुममा बिताएको केही समयपछि सबै प्रेम कता हराउँथ्यो कता ।
‘ल, यहाँबाट निस्किहाल् ।’
‘पैसा उठा र भाग ।’
र धेरैपटक गाली पनि…
आखिर म एक पुरुष यौनकर्मी न हुँ, जसले दिनलाई भन्दा रातलाई धेरै माया गर्छ । यो समाजले हामीबाट मजा पनि लिन्छ र हामीलाई यौनकर्मी भनेर गाली पनि गरिरहन्छ । मैले प्रायःजसो समाजका ठूला भनौदाहरुका पत्निसँग यौन सम्बन्ध राखेको थिएँ ।
मैले आफ्नो काममा मान्छेका असली रूप देख्न पाएँ । एकपटक त एक श्रीमान–श्रीमतीले मलाई सँगै बोलाए । श्रीमान् सोफामा बसेर रक्सी पिउँदै हामीलाई हेरिरह्यो । म उसकै अगाडि उसकी श्रीमतीसँग बेडमा थिएँ । यो काम दुबैको सहमतिमा भइरहेको थियो । सायद दुबैको यो कुनै इच्छा हुनसक्छ ।
यसैबीच कुनै दिन ५० वर्ष नाघेकी एक महिला पनि मेरी क्लाइन्ट बनिन् । उनी मेरो जीवनको सबैभन्दा भिन्न अनुभव थिइन् ।
रातभरि उनले मलाई छोरा–छोरा भनेर कुरा गरिरहिन् । उनका छोरा र परिवारले उनलाई वास्ता नगरेको कहानी सुनाइन् । उनी परिवारबाट टाढा बस्छिन् । उनले मलाई भनिन्, ‘छोरा, यो धन्धाबाट निस्किऊ, यस्तो ठिक हुँदैन ।’
त्यो रात हामीबीच कुराकानीबाहेक केही भएन । बिहान उनले मलाई छोरा भनेर तोकिएको रकम पनि दिइन् ,जसरी एक आमाले आफ्नो छोरालाई स्कूल जाने बेलामा दिन्छिन् । मलाई साँच्चै नै ती महिलाका लागि दुःख लाग्यो । अनि आफूमाथि घृणाको भावना पनि जाग्न थाल्यो। म शरीरभित्रको आत्मा होइन म त केवल आत्मा हुँ जसको नदेखिने भागलाई शरिर भनिन्छ। र म आजकल आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दै थिएँ ।
कहिले कहीँ आत्मालाई उपदेश भन्दा आफ्ना कुरा सुनिदिने कोहि मानिस चाहिने रहेछ।एक दिन मैले रक्सी पिइरहेको थिएँ र जीवनबाट थाकेको महसुस गरिरहेको थिएँ, मैले आमालाई सम्झिएँ र फोन गरें । आमालाई रिसमा भनेँ, ‘तपाईंले सोध्नु हुन्थ्यो नि, अचानक यति धेरै पैसा कसरी पठाउन थालिस् । आमा म धन्धा गर्छु …. धन्धा ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘चुप लाग्, रक्सी पिएर जे पनि बोल्छस् तँ ।’
यति भनेर आमाले फोन राख्नुभयो । मैले आमालाई आफ्नो वास्तविकता बताएको थिएँ तब उहाँले यो सुनेको नसुन्यै गर्नुभयो । मैले पठाएको पैसा समयमा नै घरमा पुग्थ्यो । म त्यो दिन बेस्सरी रोएँ । के मेरो महत्व केवल पैसामा मात्र सिमित थियो ? त्यसपछि मैले आमासँग यसबारे कहिल्यै पनि कुरा गरिनँ ।
म यो धन्धामा लागिरहेँ किनभने मैले यसबाट पैसा कमाइरहेको थिएँ । बजारमा मेरो माग थियो । काठमाडौँको जागिर खाएसम्म र मेनेजमेन्टमा भर्ना नभएसम्म यो काम गरिरहन्छु भन्ने सोचेको थिएँ ।
तर यो धन्धामा धेरैपटक अचम्मका मानिसहरु पनि भेटिए । कतिले शरीरमा घाउ बनाइदिए । कहिल्यै नमेटिने घाउ । यसको निशान शरीरमा पनि हुन्छन् र आत्मामा पनि । मलाई बुझ्नको लागि म डुबिरहेको सागरको गहिराईमा अरूलाई पनि डुबाउनु जरुरी थायो, तब मात्र थाहा हुन्थ्यो ,आखिर म भित्र कति पीडा रहेछन्। सायद मेरा व्यथा मजस्तै अर्को यौनकर्मीलाई मात्र थाहा थियो होला ।
यो व्यवसायमा गएकोमा मलाई कुनै अफसोस छैन । आफन्तले नबुझेको कुरा सायद मलाई यो धन्दाले बुझाउँदै थियो । मलाई यो धन्दाले प्रशस्तै सम्पति दिएको थियो । मेरा हरेक विलासी इच्छा पुरा गरेको थियो तर मैले पैसासँग इज्जत बेचेको थिएँ । मैले गुमाउनु पर्ने प्रत्येक ती चिजहरू गुमाइसकेको थिएँ अब म खुसी थिएँ किनकी मसग गुमाउनु को लागि कुनै चिज बाँकी थिएन । तर मैले हरेक स्त्रीसँग गरेका हरेक सहवासहरु आफ्नो इच्छा अनुरूप भने कदापी थिएनन् म त एक असल मान्छे बन्न चाहन्थेँ ।
हरेक रातमा लाग्ने जून र मबीच निकट सम्बन्ध थियो । मसँग भएका अन्यायको लेखा, जोखा गरेको थियो, बिचराले ।मभित्र पनि दागहरु छन् जूनका जस्तै तर म पनि त संसार उज्यालो बनाउन चाहन्थेँ । जूनले मलाई धेरै कुरा सिकायो “जसले जे भने पनि चुपचाप आफ्नो काम गरिरहने । सबैबाट टाढा रहने एक्लोपनामा पनि खुसी देख्न जूनले नै सिकायो।” सायद ‘आईसोलेसन’ भन्ने शब्द सबैभन्दा पहिले जूनलाई नै थाहा थियो होला । म हरेक रात फरक व्यक्तिसँग हुन्थेँ तर पनि एक्लो हुन्थेँ । हजारौं ताराहरूबिचको जून जस्तै थिएँ म पनि ।
म दुई पुरूष थिएँ; एउटा जसले जीवनको हरेक क्षण असल बाटो हिँड्ने सोचिरहेको हुन्थ्यो र अर्को जसले नियमित यौनको दासत्व स्वीकार गरिरहेको हुन्थ्यो ।“म पुरूष यौनकर्मी हुँ?” कि “असल व्यक्ति पनि?” मभित्र यी दुई प्रश्नको द्वन्द चलिरहेको हुन्थ्यो । आखिर जिन्दगीले पनि संकटको वर्षा गर्दोरहेछ तबसम्म जबसम्म मान्छेले आफ्नो लक्ष पहिल्याउन सक्दैन । अब म यो सबै काम छाडेर असल जीवन जिउन चाहन्थेँ ।
आवेगले मानिसलाई सुत्न, खान, काम गर्न र शान्त रहनबाट वञ्चित गराउँदो रहेछ । मैले नेपालमा आफ्नो पढाईमा धेरै मेहेनत गरेँ । ठमेलको अफिसले मलाई बिदेश तिर धेरै तान्यो किनकि त्यहाँ धेरै विदेशी पर्यटक हुन्थे । अनि मैले पनि धेरै पर्यटकसँग रात बिताएको थिएँ र मलाई पर्यटकबाटपनि एउटा कुरा थाह भयो नचिनेको ठाउँमा सबैलाई सबैले इज्जत गर्दो रहेछन् बस पैसा ठूलो रहेछ । मलाई आफ्नो देश छाडेर विदेशिनुको कुनै सोख थिएन तर आफ्नो देशमा मेरा लागि कुनै इज्जत पनि त थिएन । म यहाँ केवल पुरूष यौनकर्मीको लिस्टमा समेटिएको थिएँ । मैले ती ६ वर्षमा एमबिए गरेँ । अहिले म युरोपको शहरमा छु, युरोपको प्रसिद्ध बैँकको म सफल मेनेजर हुँ । युरोपमा मेरो इज्जत र सम्पत्ति दुबै छ, म यहाँको माल बनेको छु। ‘माल’ अर्थात् सम्पतिवाल मानिस । मलाई यहाँ कसैले चिन्दैनन्, मैले आफ्नो गाउँ घरमा मेरो मृत्यु भएको सन्देश पठाइदिएँ र आमालाई चाहिने जति पैसा पनि । म अहिले फोहोरको डङ्गुरमा फुलेको सुन्दर फूल जस्तै भएको छु न त कसैले टिप्ने नै आँट गर्छ, बस् म फुलिरहेछु । अब छिट्टै विवाह गर्ने र सफल वैवाहिक जीवन जीउने विचारमा छु । मलाई यहाँ प्राय आफ्नो देश नेपाल र ती आमाजस्ती ५० वर्ष नाघेकी महिलाको मात्र याद आउँछ ।